Andro Farany—Faminanian’ny Baiboly, Fizarana 6
Mampiavaka ny Baiboly ny faminaniana ao anatiny. Miresaka momba izany ny Mifohaza! ato amin’ity andian-dahatsoratra misy fizarana valo ity. Hovaliana amin’izany ny hoe: Olona nahay be fotsiny ve ireo mpanoratra ny faminaniana ao amin’ny Baiboly, sa olona nahazo fanahy masina avy amin’Andriamanitra? Asaina ianao handinika ny zava-misy.
MIAINA amin’ny fotoan-tsarotra isika. Hita amin’ny vaovao foana hoe misy loza sy korontana, na aiza na aiza. Misy heviny manokana ve izany?
Efa 2 000 taona teo ho eo izay ny Baiboly no nilaza fa tena ho mafy ny fiainana eran-tany mandritra ny “fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity.” (Matio 24:3) Tsy ilay fara andro eritreretin’ny olona anefa izany. Resahin’ny Baiboly kosa ny zavatra hitranga sy ny toetran’ny olona amin’ilay fotoana antsoina hoe “andro farany.” (2 Timoty 3:1) Rehefa “mitranga izany zavatra izany”, hoy i Jesosy tamin’ny mpanara-dia azy, dia ho avy tsy ho ela ny fanamaivanana. (Lioka 21:31) Andeha isika handinika faminaniana vitsivitsy izay mampiavaka ny androntsika.
“Hisy firenena hitsangana hamely firenena.”—Matio 24:7.
Fahatanterahany: Maro no nanantena fa mbola hitohy ny fiadanana, tany am-piandohan’ny taonjato faha-20. Taitra àry ny olona eran-tany rehefa nipoaka ny Ady Lehibe I, ary nisy ady mahatsiravina foana nanomboka teo. Tanteraka ilay voalazan’ny Baiboly ao amin’ny Apokalypsy 6:4 hoe: ‘Hesorina ny fandriampahalemana amin’ny tany mba hifandripahan’ny olona.’
“Toy ny hoe nifarana ny vanim-potoana iray rehefa nipoaka ny Ady Lehibe Voalohany tamin’ny 1914, ary nanomboka ny vanim-potoana vaovao.”—Ny Nahatonga ny Ady Lehibe Voalohany (anglisy), nivoaka tamin’ny 1992..
Tsy fantatra tsara ny isan’ireo maty nandritra ny Ady Lehibe I. Milaza anefa ny rakipahalalana iray fa ny miaramila maty fotsiny no efa 8 500 000 teo ho eo..
Mbola betsaka kokoa ireo maty tamin’ny Ady Lehibe II, satria miaramila sy olon-tsotra 35 ka hatramin’ny 60 tapitrisa teo ho eo no namoy ny ainy.
Nisy ady 246 tany amin’ny toerana 151 eran-tany, taorian’ny ady lehibe faharoa ka hatramin’ny 2010.
“Hisy mosary.”—Matio 24:7.
Fahatanterahany: Olona 70 tapitrisa mahery no matin’ny mosary tamin’ny taonjato faha-20 ary mbola olana eran-tany izy io.
Milaza ny Firenena Mikambana fa ny hanoanana no antony lehibe indrindra mampaharary ny olona, ary ny ampahafiton’ny mponina eran-tany izao no tsy ampy sakafo.
“Mitombo be ny isan’ny mponina, kaohin’ny riaka ny nofon-tany, tsy ampy ny rano, ary miakatra ny mari-pana. Ireo no antony efatra mahatonga ny mosary, fa tsy zavatra maningana toy ny hoe ratsy ny toetrandro ka kely ny vokatra.”—Amerikanina Siantifika.
“Hisy horohoron-tany lehibe.”—Lioka 21:11.
Fahatanterahany: Mitombo be ny olona mamoy ny ainy na iharan-doza noho ny horohoron-tany, satria mihamaro ny olona mipetraka eny amin’ny toerana mora isehoan’izany.
Hoy ny Tatitra Momba ny Loza Eran-tany Tamin’ny 2010 (anglisy): “Ny horohoron-tany no loza lehibe nahafaty olona be indrindra, tato anatin’ny taona vitsivitsy.”
Horohoron-tany lehibe * 19 isan-taona teo ho eo no voalaza fa nitranga nanomboka tamin’ny 1970 ka hatramin’ny 2001, ary 19 547 teo ho eo no namoy ny ainy. Lasa 28 isan-taona teo ho eo izany, nandritra ireo 10 taona talohan’ny 2012, ary 67 954 teo ho eo no maty.
‘Hisy areti-mandringana any amin’ny toerana samy hafa.’—Lioka 21:11.
Fahatanterahany: Mandroso ny fitsaboana, nefa mbola olona an-tapitrisany isan-taona no matin’ny areti-mifindra. Vao mainka atahorana hiely haingana izay aretina mipoitra, satria tsy manahirana izao ny mankany an-tany hafa sady mitombo be ny mponina an-tanàn-dehibe.
Olona 300 ka hatramin’ny 500 tapitrisa teo ho eo no matin’ny nendra, tamin’ny taonjato faha-20.
Milaza ny Fikambanana Mpandinika An’izao Tontolo Izao fa tato anatin’ny 30 taona, dia “maherin’ny 30 amin’ireo aretina mbola tsy fantatra taloha no nipoitra sady tena atahorana, anisan’izany ny Ebola, VIH, Hantavirus [izay mamely ny voa sy havokavoka], ary ny pnemonia atipìka.”
Hoy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, mahakasika an’ireo aretina tsy laitram-panafody: “Lasa tsy mandaitra intsony izao ny antibiotika ka aretina maro no tsy hisy fanafany, ary hamono olona indray.”
“Hamadika ny namany” ny olona “ary hifankahala. ... Hihamangatsiaka ny fitiavan’ny olona maro.”—Matio 24:10, 12.
Fahatanterahany: Nisy ny fandripahana foko noho ny fankahalana, ka an-tapitrisany no maty. Mampitombo ny herisetra sy ny tahotra any amin’ny tany maro ny ady sy ny heloka bevava.
Nandripaka Jiosy enina tapitrisa sy olon-kafa an-tapitrisany ny fitondrana nazia. Hoy i Zygmunt Bauman, mpanoratra, momba ny fihetsiky ny olon-tsotra nanoloana an’izany: “Tsy nisakana an’ilay fandripahana tambabe ny olona sady tsy niraharaha, fa nangina fotsiny.”
Milaza ny Vaovaon’ny BBC fa tombanana ho 800 000 eo ho eo ny Tutsi sy Hutu maty, tao anatin’ny volana vitsivitsy monja. Misy mpikaroka milaza fa olona 200 000 teo ho eo no nandray anjara tamin’ilay vonoan’olona.
Maherin’ny 740 000 isan-taona no maty noho ny heloka bevava sy ny ady ampiasana fitaovam-piadiana.
“Ny olona ho tia tena, ho tia vola, ... tsy ho tia ny mpianakaviny.”—2 Timoty 3:2, 3.
Fahatanterahany: Tia vola ny olona ankehitriny sady samy manao izay saim-pantany. Maro ny olana aterak’izany.
Hita tamin’ny tatitra momba ny ankizy nataon’ny UNICEF any Royaume-Uni fa “toa mividy zavatra foana” ny ray aman-dreny sy ny ankizy, “mba hanonerana ny disadisa ao an-tokantrano sy mba hampilamina ny saina.”
Ankizy 275 tapitrisa eo ho eo no iharan’ny herisetra ao an-tokantrano, eran-tany.
“Any Etazonia fotsiny, dia zokiolona 500 000 mahery isan-taona no eritreretina hoe misy mampijaly na tsy misy miraharaha.”—Foibe Miady Amin’ny Aretina.
“Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity.”—Matio 24:14.
Fahatanterahany: Milaza ny Baiboly fa tena fitondram-panjakana ny Fanjakan’Andriamanitra. Any an-danitra izy io ary i Jesosy no Mpanjakany. “Hotorotoroin’izy io sy hofoanany [ny fitondram-panjakan’olombelona rehetra], fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra.”—Daniela 2:44.
Ny momba ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny zavatra hataon’izy io no tena ampianarin’ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany.
Mitory ny vaovao tsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra ny Vavolombelon’i Jehovah, ho fahatanterahan’ny Matio 24:14
Mampianatra momba ny Fanjakan’Andriamanitra ny Vavolombelon’i Jehovah maherin’ny fito tapitrisa, any amin’ny tany 230 mahery.
Mamoaka fanazavana ara-baiboly amin’ny fiteny 500 mahery ny Vavolombelon’i Jehovah, amin’ny boky sy ny Internet.
Midika inona ho anao ireo faminaniana?
Miaiky ny olona an-tapitrisany rehefa avy nandinika ny zava-misy, fa efa miseho ireo famantarana momba ny andro farany. Porofoin’ny tantara fa tanteraka foana ny faminanian’ny Baiboly, araka ny hitantsika tao amin’ireo lahatsoratra enina tato amin’ity andian-dahatsoratra ity.
Matokia fa ho tanteraka ny faminanian’ny Baiboly momba ny hoavy. Hisy vokany eo aminao izy ireny, satria mampanantena Andriamanitra fa hofaranany ity andro farany mampahory ity. Hohazavaina ao amin’ny lahatsoratra roa farany amin’ity andian-dahatsoratra ity hoe ahoana no hiafaran’ny “andro farany” ary inona no zavatra tsara hataon’Andriamanitra eto an-tany sy ho an’ny olombelona.
^ feh. 22 Milaza ny Foibem-pikarohana Momba ny Loza fa atao hoe “horohoron-tany lehibe” ny horohoron-tany raha mahatonga ny iray amin’ireto: Olona 10 na mihoatra no maty, olona 100 na mihoatra no iharan-doza, manome fanampiana vonjy rano vaky ny fanjakana na mitady fanampiana avy any ivelany.
Vaovao Tsara ho An’ny Olona Rehetra—Faminanian’ny Baiboly
“Ho Tonga ny Farany”—Faminanian’ny Baiboly
“Ho Tonga Anie ny Fanjakanao”—Faminanian’ny Baiboly